Aqalka sare oo xalinaya khilaafka u dhexeeya Dowlada dhexe iyo M/Gobaleedyada. | Saadaal Media
Aqalka sare oo xalinaya khilaafka u dhexeeya Dowlada dhexe iyo M/Gobaleedyada.
Gudiga Joogtada Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo maanta kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ay kaga hadleen Khilaafka Siyaasadeed ee xiligan u dhexeeya Madaxda Maamul gobaleedyada iyo Dowlada dhexe ee Soomaaliya.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ah Gudoomiyaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Soomaaliya oo la hadlay Warbaahinta ayaa waxaa uu Maamul gobaleedyada ugu baaqay in ay joojiyaan Mooshinka ay ka wadaan masuuliyiinta ka tirsan madaxda Dowlad gobaleedyada,Xili shalay Qaar ka mid ah Xildhibaanada Galmudug ay mooshin ka dhan ah Gudoomiyaha Baarlamaanka Galmudug ay u gudbiyeen Gudoomiye ku xigeenka Koowaad ee Baarlamaanka Galmudug Xareed Cali Xareed.
Sidoo kale Gudoomiyaha Aqalka Sare ayaa waxaa uu sheegay in dhawaan Wafdi ka socda Aqalka sare ay u diri doonaan Degaanada maamul gobaleedyada,si loo xaliyo khilaafka ka dhex aloosan Madaxda Dowlad gobaleedyada iyo Dowlada Dhexe.
Dhawaan ayay aheyd markii Madaxda maamul gobaleedyada ay sheegeen in ay hakiyeen xiriirkii ay la lahaayeen dowlada dhexe ee Soomaaliya.